"Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny HomePod", horonan-tsary farany an'i Apple amin'ny mpandahateny | Avy amin'ny mac aho
Efa imbetsaka izahay no nilaza azy io, saingy Apple dia manambara amin'ny dropper izay rehetra azo atao miaraka amin'ny HomePod, ny fandefasana farany ny orinasa. Na izany aza, ny fitaovana dia efa misy amin'ny tsena maro ary tonga ny fotoana hitenenana hoe inona no azon'ny mpampiasa atao amin'ny fividianana ny HomePod. Farafaharatsiny ao amin'ny kinova voalohany.
Mba hahafahana manolotra sary amin'ny endriny bebe kokoa ny tombotsoan'ny HomePod, Apple dia mampiasa ny fantsona YouTube azy mba hamoahana horonantsary manazava ny amin'ireo asa tsara indrindra ampiasain'ny fitaovany. Tao anatin'ireo lahatsoratra vao haingana dia hitantsika ny nifantohan'izy ireo tamin'ny mpandahateny mahay avy any Siri. Ary tato ho ato dia namoaka horonantsary vaovao izay nampitondrainy lohateny hoe: "Ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka indrindra amin'ny HomePod". Avelanay ho anao aorian'ny fitsambikinana.
Roa minitra mahery no maharitra ilay video manazava. Y manarona ny lohahevitra rehetra tokony ho fantatrao momba ny HomePod. Voalohany indrindra, manazava ny fomba ahazoana fampisehoana tsara kokoa avy amin'ny mpandahateny i Apple rehefa mihaino mozika ianao: azonao atao ny mangataka an'i Siri ho an'ny hira iray manokana, ho an'ny mpanakanto na ho an'ny karazana iray. Ary koa, ary satria efa elaela no fantatra dia azonao atao ny mangataka amin'ny HomePod ny vaovao farany ary avereno aminy aminao amin'ny endrika Podcast.
Raha, ny mpandahateny mahay koa dia afaka miasa toy ny handsfree. Avy amin'ilay horonan-tsary dia lazain'izy ireo aminao ny fomba tokony hanatrehanao ireo antso sy hamaranana sy hanantonana anao dia tsy maintsy mikasika ny tapany ambony amin'ilay fitaovana ianao, izay misy ny sary famantarana Siri. Ho fanampin'izany, azonao atao ihany koa ny mifehy ny lafiny sasany amin'ny iPhone toy ny fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo, manampy fampahatsiahivana na afaka mampiato fanairana isan'andro.
Farany, Apple tsy manadino ny SmartHome na trano marani-tsaina. Ilay mpandahateny mahay koa afaka mifehy ny sasany amin'ireo fitaovana ireo ianao mifandray izay anananao ao an-trano toy ny takamoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » "Ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka indrindra amin'ny HomePod", horonantsary farany nataon'i Apple tamin'ny mpandahateny anao